Shirkadda Isgaadhsiinta Casriga ah ee Telesom Oo Qabatay Xafladdii Abaal-marin 12-aad ee Shaqaale Weynaha TELESOM | Araweelo News Network
Gudoomiy aha Guud ee Shirkadda TELESOM Md. Cabdikariin Maxamed Iid oo soo gunaabaday qudbadihii laga jeediyey madasha ayaa hadalo badan oo isku jira mahadnaq, dhiiri-galin, amaan iyo dardaaran u jeediyey guud ahaan maamulaha iyo Shaqaale weynaha shirkadda TELESOM, waxaanu sidoo kale booriyey shaqaalaha inay la yimaadaan hal-abuurnimo iyo currin wax weyn ku soo kordhisa horumarka shirkadda. Gudoomiye Cabdikariin ayaa yidhi, “Maxaynu hiigsanaynaa maxaynu doonaynaa inaynu gaadhno. Waynu ognahay halkii aynu ka soo bilaabnay ee ahayd inaynu moobayl iyo fixed line shirkadd ahaan shaqadeena ku bilownay, maantana halkaynu joogno waa dareensanahay….Cloude service oo ah inaynu adeeg dhamaystiran u qabano bulshadeena waa mid qorshaheena inoogu jirta sanadkan insha Allaah oo dhismihii, Waaxdii iyo shaqaalihii hawshaa hanan lahaa ay u dhamaystiran yihiin iyo qalabkiiab Insha Allaahna aynu gaadhi doono Haddii uu Allah yidhaahdo. Waxaanu kaloon ku talo jirnaa inaynu moobaylka horumar fara badan ku samayno iyadoo dhinacyadda caafimaadka, waxbarashadda, dhaqaalaha iyo saxaafada aynu uga faa’iidaysan doono bi’idni laahi tacaalaa. Waxaa kale oo aynu iyana horumar ku samayn doonaa sidaynu u qaybin lahayn adeegyadda kala gadisan ee aynu koox ahaan leenahay in aynu meel iskugu keeno oo aynu midayno insha Allaahu haddii Ilaahay yidhaahdo ” Sidaasi waxaa yidhi gudoomiyaha Shirkadda Telesom.